July 7, 2020 Mahad Jama 0
GAALKACYO(P-TIMES)- Goboladda dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayey isbadal dhanka bulshada ahah, kadib markii uu joogsaday qaadkii la keeni jiray.
Arintani ayaa sabab u ah dagaalada iyo qalalaasaha weli ka socda gudaha dalka Ethiopia oo ah dalka kaliya ee haatan qaadkiisu imaan jiray deegaano badan oo Soomaaliya ah, waxaana deegaanada xuduudaha ah iyo deegaanada kale ee durugsan sameeyey maandooriyaha qaadka.
Goobaha lagu kulmo ee bulshada sida carwooyinka, maqaaxiyaha, hudheelada cunada iyo goobaha kale ee laga dukaamaysto ayaa waxaa intooda badan lagu arkayaa bulsho badan, kuwaas oo hore aan loogu arki jirin.
Dhaqaalaha dalka ayaa sii xoogaystay tan iyo intii la joojiyey qaadka si looga hortago faafitaanka cudurka Coronavirus muddadii ay jirtay xayiraadu, waxaana fursadaasi ay u noqotay qoysas badan oo Soomaaliyeed madal farxadeed iyo kulamo cajiib ah oo dhex maray gudahooda.
Dareenka kaliya ee bulshada wada simay ayaa ahaa waxyeelada qaadka iyo dhibaatooyinka caafimaad ahaan ee ku xeeran, waxaana dad badani ay go’aansadeen xiligaasi joojintiisa
Inkastoo ay jireen qorshayaal iyo wadooyin kale oo uu soo marayey qaadku muddadii xayiraada la saaray hadana waxyeeladu ma aysan badnayn.
Dowladdaha Ethiopia iyo Kenya oo dhaqaale badan ganacsatadoodu ka sameeyaan maandooriyaha qaadka ayaa dadaalo badan ku bixiyey marar badan u soo gudbinta Soomaaliya qaad badan, waxaana Kenya kasoo duushay diyaarad siday qaad taas oo sheegtay in dawooyin looga hortago cudurka Coronavirus ay gaadhsiin doonto goboladda dalka hasa yeeshee qorshaheedii ayaa fashilmay goor dambe.
Sidoo kale magaalada Hargeysa ayaa iyadana laga celiyey todobaadkani diyaarad siday qaad badan, kadib amar kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya.
Ganacsatada u dhashay dalkaasi Kenya ayaa lacago badan ku qarash gareeyey gaynta deegaanada Somaliland qaad badan, taas oo fashil ku noqotay mar kale maadaama ay hore ugu guul daraysteen isku dayo badan.
Maanta waa jawi kale iyo rajo u muuqata mid midayn doonta quluubta dad badan oo isugu jira qaraabo, saaxiibo iyo daris, kuwaas oo muddo ku kala jiray mawjado is bahaystay oo mustaqbalkooda nololeed lagu aafaynayo.
Arinta ugu daran ayaa dhaqaale bur burin iyo waxyeelo caafimaad oo aad u daran, waxaana colaadaha ka jira gudaha Ethiopia ay mar kale fursad kulan iyo is xog waraysi u noqdeen kumanaan qoys, kuwaas oo aan xitaa iska war qabin baahi ahaan.
Bur burka qoysas badan iyo dacayada ubad badan ayaa qayb ka ah hadimooyinka ku wareegsan qaadka, waxaana uu sabab u noqday in kumanaan haweenkii sharafka ahaa ay banaanka u soo baxaan si ay nolosha qoysaskooda u dabaraan maadaama ragii ay gabeen kaalintii horumarineed ee qoysaskooda.
Waa madal kale iyo farxad rig rigi doonta quluubta shacab u dulman dowladdo kale oo dhibaataynaya caafimaadkooda sidoo kalena bur burinaya dhaqaalahooda, waxaana xaalku u muuqda mid guulaysan doona walowse ay jiraan talooyin caafimaad iyo digniino hore loo shaaciyey weli muqawadiintu ma aysan hanuunin.
Ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa farxado badan, kulamo is barasho iyo horumarin caafimaad si meesha looga saaro maandooriyaha qaadka oo dhibaato xoogan ku haya bulshada.